Indonesia in Focus: Islam ku liibaantid oo aad loo abuuro nin nabadeed.
Islam ku liibaantid oo aad loo abuuro nin nabadeed.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (363)
(Qaybta saddex boqol iyo lixdan iyo saddex), Depok, West Java, Indonnesia, September 5, 2015, 02:45 pm).
Diinta Islaamka ayaa shaaca ka qaaday by Ilaah xagga Gabriel Angel in ay Nabiga ku qoran kitaabka quduuska ah (/ xadiis al-bartay) Quraanka iyo Sunnaha waxaa loogu tala galay si ay dadku ugu noolaan karaan si ammaan ah, farxad iyo barwaaqo labadaba ku nool adduun iyo aakhiraba (Janno ).
Islam bara waa in bani aadamka ma dilo oo kale, xitaa haddii aadanuhu uma uusan muslimay (gaalada), xitaa Nabiga yiri qof aan tegi doonaa samada haddii dilay qof kale, inkastoo uu gaalo.
Sidoo kale Islam bara nolosha fudud, oo aan ku xadgudba, maxaa yeelay, ee xog ah ee duruusta Islaamka waa yamh ah sameynta boqolaal shaqaalaha ka Shiinaha Islaamka, sida uu daawaday aaska of Saudi King si fudud u samayn, oo aan dhawaaqa qaraxa oo waxaa lagu aasay aad u fudud oo lagu aasay kaliya xabaashii macmal ah oo aan si deeqsinimo ah.
Diinta Islaamka waa mid fudud oo aan macquul ahayn hadii aan sharax si cilmiyeysan oo u mareysa in ay dhagaystayaasha si fudud ku milmaan. Tani waa waxa Ustad Canada Iyada wacdintiisa, in ka badan 3,000 oo askari oo US bersyahadat (gali Islam) oo ku dhex jira Dagaalkii Khaliijka ka. Hadda, Ustad (culimada) oo ku dhashay magaca Dennis Bradley Philips oo caalamka ah oo ay ku jiraan Indonesia inuu wax ku wacdiyo.
REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Iyada oo wacdiga, in ka badan 3,000 oo askari oo US bersyahadat ku dhex War Khaliijka ah. Hadda, culimada ku dhalatay magaca Dennis Bradley lahaa fursad ay ku soo bandhigaan Philips this buuxiyo jasiiradaha dacaayad bannaan ee.
Faafinta hawlaha muwaadin Canadian Jamaica u dhashay waxaa ku filan inuu wax xado dareenka dunida. Dr Abu Ameenah Bilal Philips waa ay awoodaan in ay bixiyaan sharraxaad sayniska, dhab iyo sida qumman in beesha caalamka in ay muhiim tahay laakiin ka buuxsamay qalad ka dhanka ah Islaamka.
In la gaarsiiyo uu fariin, Dr Bilal Philips leeyihiin awoodda sayniska aqoonta sare. Wuxuuna barnaamijka BA berrinkii Studies Islaamka ka ah Jaamacadda Islaamiga ah ee Madiina, MA barnaamijka ee Islamic Theology at King Saud University Riyadh, iyo ugu dambayntii heshay horyaalka ee PhD ee Islamic Theology ka University of Wales.
Dr Bilal Philips ayaa sidoo kale gacan ka geysaneysaa in kobciya suugaanta Islamic leh in ka badan 50 buugaag uu qoray, turjumi iyo faallo. Waxa uu sidoo kale saxar ah oo la daabacay taxane ah oo 56 buugaagta iimaanka carruurta ee dugsiyada International Islamic.
Safarku wuxuu ahaa mid nolol iyo ruuxa uu farriin dhiiri Dr Bilal Philips in ay xarun ka mid ah Daraasaadka Islaamka ee dalalka kala duwan, oo ay ku jiraan Department of Studies Islaamka ee Preston University ee dalka Imaaraadka Carabta, Academy of Studies Islaamiga ah ee Qadar, Waaxda Daraasaadka Islaamka in English Jaamacadda Aqoonta Caalamiga ah ee Saudi Arabia, College ee ku taall iyo Islamic Dhaqanka ee Sudan iyo sidoo kale sameynta Preston International College ee Hindiya.
Iswaafiqida of technology ee soo mara digital maanta, waxa uu sidoo kale adeegsadaa iyada oo loo adeegsanayo dacaayad si ay u gaaraan dadka adduunka. Sanadkii 2007, Dr Bilal Philips aasaasay Islamic Online University ee (IOU) sida hay'adda ugu horeysay ee qabanqaabiyaa waxqabadyo waxbarasho Islaamka stratum-1 online. Si maanta, IOU waxay leedahay in ka badan 150,000 oo ardayda ka 219 dal, samaynta IOU sida jaamacadda koowaad ee dunida ku kala duwan ardayda.
In dhexdeeda ee uu shaqada hawlaha tacliinta iyo dacaayadda, Dr Bilal Philips waqti u qaatay inuu buuxiyo qiimeynta guud ee Indonesia. IOU ayaa u magacaabay IslamDiaries mid ka mid taklim ee Indonesia in baadhitaan lagu sameeyo on "Maxaad Islam?" Si la qaban on September 7, 2015 ee Masjid Al Bina, Jalan Pintu Satu Jakarta, Senayan, Jakarta.
TAUHID, WADDADA caddaaladda iyo barwaaqo
BOOSKA TAUHID IN ISLAM
Tawhid waa xididka mahad Muslim ah. 
Alhamdulillaah, waxaan mar walba ku bixin mahad dhamaadka lahayn in Alle -Rabb naxariis Naxariista. Waxa uu leeyahay laba raallinimo ka daran, oo janjeero Nicmada Islaamka iyo Sunnah. Iyada oo labada Nicmo, nin ka heli doontaa farxad iyo badbaadi cadaabka, labada adduun iyo aakhiro.
Sidaa darteed, u ah addoommo Ilaah oo ay heleen Nicmada sida waa, waxaa sido ku Shukriya, oo had iyo jeer ka baryo Ilaah, si ay u noqdaan addoon had iyo jeer u mahadisaan. A Muslim iyo caddayn ah oo soo dhoweeyey hadiyaddan, kuwaas oo ay u noqon ahaanshaha Muslim in Ilaah Eebihiis, Diin aan Islaamka sida iyo Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sida uu cadeeyay nabiga.
Salaadda iyo salaanta laga yaabaa in had iyo jeer tercurahkan Nabiga dabool nebiyada ahaa ah, nebi ma sesudahnya- kaas oo lagu fariin ah, oofiyo igmaday, talin Umadda, iyo Umadda ayaa u kaxeeyaa jid iftiinka iyo si toos ah, taas oo ay lahaayeen ka hor ku Sugan Baadi Cad.
Waajibaadka Muslim dhab ah u yahay laf Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii aamin ah, ka dib markii su'aalo ah, ku daydo uu tusaale ahaan, fuliyaan Sunnah iyo-Sunnah sunnah difaaco, oo ka fogaada shirk iyo faasiqnimo. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii Ilaah laga soo diray, in uu ku qanciyo dadka Ilaah mentauhidkan iyo sii cayn kasta oo shirk.
WEEDHAHA midnimada Muslimiinta, gaar ahaan tukan Sunnah wal jamaacadda Xukunkani waa kii aan shisheeye, sababtoo ah tawxiid iyaga, sida hab lagu caabudo oo ay tahay in laga hirgeliyo nolol maalmeedka iyo kuwa kale oo hore ugu wacdiyey ka hor.
... Sidaas Caabuda Eebe by daahiriyey ayuu isaga u addeeco. Xusuusnow, Diinta Eebe kaliya iska leh shabaqa (ka warwareego) ... [az-Zumar / 39: 2, 3]
In kastoo aan ku amray, marka laga reebo si uu u Caabudi oo Eebe kaliya by daahiriyey ayuu isaga xagga addeecidda ... [al Bayyinah / 98: 5].
Oo dhan ayaa ka mid ah nebiyo iyo rasuullo عليهم الصلاة والسلام wacdiyey tawxiid qoomkiisii isagoo muddo kasta (Qarni) waxaa. Sida Eebe wuxuu leeyahay,
Dhab ahaan, waxaan u dirray Qoomkiisii si kasta Rasuul, (wicitaanada) si ay u caabudno inay Eebe (ie mentauhidkanNya) oo ka fog Shaydaan ... [ah-Nahl / 16: 36].
Manaan Dirin Rasuul kasta (Nabiyow) ka hor waxaan u waxyoonay in ay: "Bal eeg, Ilaah kale ma jiro (xaq u leeyahay inuu si sax ah diibadahi) oo aan ahayn ayaan, idinku waa inaad i caabuda". [Al-Anbiya '/ 21: 25].
Waxa uu sidoo kale erayo:
Markaas Waxaana u Dirray Dhexdooda Rasuul ka mid ah (Isagoo Dhihi) "waxaad caabudaysaan inay Ilaah, mararka Ilaah kale ma jiro xaq ah in aad dadka kale Sidaas, maxaad isaga kama aanan baqeen (Xagiisa).?" [Al Mukminun / 23: 32].
Rasuullada oo dhan ay bilaabaan in ay howlgalka ay u Qoomkiisa inay tawxiid Uluhiyyah, si ay keliya caabudaan karaa Ilaaha runta ah oo keliya.
Rasuullada oo dhan ku yidhi qoomkiisii si ay u caabudno Alle oo keliya. 
Ammaan nasaha sayniska ku xiran tahay waxa ka soo baratay. Iyo sayniska ee tawxiid waa sida sharaf-sharaf sayniska. Science in ugu weyn oo sharaf leh sayniska ee tawxiidka leh iyo Ushuluddin yahay. Maxaa yeelay, ku tawxiid in Eebe u abuuray Jinni iyo Insiba leh, buugaagta hoos, diray rasuulladii, iyo in la abuuro janada iyo cadaabta. Qof kasta oo daraasaad sayniska iyo ku dhaqma, markaas ninka xaqa ah inuu ku faraxsan yahay. Halkii, Ruuxiise iska dhega tirin, mana doonayo in ay wax ku bartaan, markaas isagu waa kan ugu gataan, iyadaana u.
Ilaah u sheegay addoomadiisa inaad wax ka barato syar'i, ugu horeeyay ee la bartay waa sayniska ee tawhid, Ilaah wuxuu og yahay, la baaro sidii Ilaah mentauhidkan, si fiican caabud. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Ogaadana in Eebe ahayna ma jiro (oo xaq diibadahi midig) Eebe mooyee, waxayna u dambidhaaf oo dembiyadiinna aawadoodna iyo in ka badan (dembiga) Mu'miniinta, rag iyo dumar ku weydiin. Eebe waa ogyahay meesha ganacsiga iyo deganaansho-mu. [Muhammad / 47: 19].
Dadka dhiman tahay dawlad ka ifayo inay Ilaah, ka dibna uu doono cirka u tegi. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ku alla kii ku dhintay wuuna garanayaa Ilaah kale ma jiro ayaa diibadahi saxda ah si sax ah Eebe ka sokow, ka dibna uu aado xagga samada. 
Sidaas darteed, booska uu ka tawxiid waa sida aasaas u ah dhisidda hay'ad samafal ah oo Muslim. Dareenka ayaa dabcan caqli leh mar walba diiradda saaray hagaajinta aasaas u ah. Inkasta oo nacas ah, inuu sii wadi doono in uu sare u dhismaha, oo aan adkeeyso aasaas u ah, si dhismaha robohlah.
Daacadda iyo tawxiid, sidoo kale loo ekaysiiyaa geed koraa beerka, camal laamahuna way yihiin, nabad waa midhaha la dareemay nolosha adduunyo, iyo farxad weligeed ah ee Aakhiro. Sida midhaha Jannada, ma noqon doonto gooyey iyo sharci darrada ah. Sidoo kale, "midho" daacadda iyo tawxiid adduunka, in aan la kala gooyey doonaa oo sharci darrada ah. Kesyirikan, been iyo liidaa 'sida geed in uu korayo ee wadnaha aadanaha, oo uu adduunka waa cabsi, welwelin, wareer iyo narrowness oo la dareemay xabadka, iyo gudcurkii wixii ku dhacay beerka. Iyadoo Aakharaana u dhali doonaan cunaysaan  iyo Cadaab weligeed ah. 
TAUHID QEEXITAANKA & NOOCYADA walax 
Tawhid -in afka Arab waa mashdar ee وحد, يوحد, توحيدا, waxa ay ka dhigan tahay samaynta wax ka mid ah.
Tawhid syar'i sayniska -in (Eray bixin) - waa u dhac ah oo Ilaah gaar ah isaga wax, labadaba Uluhiyyah, Rububiyyah, iyo Asma 'iyo astaan ah. Ifayo ka dhigan tahay oo keliya caabudo Eebe.
Tawhid ka kooban yahay saddex nooc: Rububiyyah ka ifayo, ifayo Uluhiyyah oo ka ifayo al Asma 'dhaqo-Shifat.
Tawhid Rububiyyah, kuwaas oo wax walba mentauhidkan waxa la qabtay imtithaal, sidoo kale la abuuro, la siiyo nasiib wacan, shid iyo off. Ilaah waa King, Qaadirka iyo Rabb oo diyaarin wax walba. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
... Xusuusnow, abuurista iyo amro Ilaah xaq saxda ah. Nasahan Eebe, ee Eebaha Caalamka ah. [Al A'raf / 7: 54]
Tawhid Uluhiyyah, kuwaas oo dhac ah imtithaal oo dhan shaqo addoommadaada, kuwaas oo jid ay sawiri karaan dhaw in Ilaah markuu disyari'atkan isaga by, sida ku tukanayay, Khauf (cabsi), boqorka '(rajo), mahabbah ( jeclahay), dzabh (gawrici), bernadzar, isti'aanah (caawimaad), istighatha (gargaar jeer adag), isti'adzah (ee badbaadinta) oo dhammu waxay Ilaah ku amray in disyari'atkan iyo menyekutukanNya ma leh waxa sidoo kale. Kuwan oo dhan iyo cibaadada kale waa in la sameeyaa oo keliya in Eebe kaliya oo daacad ah oo ku saabsan.
Eebahaana waa Alle, Ilaah kale oo uu leeyahay diibadahi saxda ah si fiican, lakiin isaga ma. Eebaha Raxmaana, Dhaafe Naxariista. [Al-Baqarah / 2: 163].
Ifayo Asma 'dhaqo-Shifat Ilaah, waa in la dhiso wax Allaah iyo Rasuulkiisa ayaa sameeyey xaggiisa, sidoo kale magacyada ama dabeecadda Ilaah, iyo sidoo kale mensucikanNya ceeb oo dhan iyo ceebaha, sidii loo nadiifiyo Eebe iyo Rasuulkiisa. Oo waxaannu dhisi doona Nature Ilaah, labadaba ku jira Quraanka iyo al Sunnah, oo waa in aanay noqon ditakwil.
Ma jiraan wax isaga la mid yahay. Isagaa u All-maqalka Ragga arka. [Ash Shura / 42: 11].
Islaamku waa A DIINTA TAUHID
Qeexidda Islaamka waa:
(Dhiibaan Ilaah jidka mentauhidkanNya, isagayna u khushuucaan si ay u hirgeliyaan u hogaansanaan (in ka badan amarradayda oo dhan, oo laga reebay), iyo naftaada oo lacag la'aan ah ka shirk iyo kuwa warwareego). 
Haddii aan ku soo laabto al Quraanka, Eebe waxa uu inagu wargeliyay 'Rasuul aqidah oo dhan waa tawxiid, iyo howlgalka bilaabmaa tauhidullah, iyo tawxiid waa arrinta ugu weyn oo ugu muhiimsan in ay fuliyaan.
Sidaas darteed, xiriirka 'Aqeedah ee tawxiid kulankii ay nebiyadii Shareecada Islaamka oo dhan (oo ay ku jiraan Nabiga) عليهم الصلاة والسلام waa sida aasaas u ah dhismaha ah (iyo sida ruuxa ee jirka). Sababtoo ah meydadka ma kici doonaa oo ku nool, marka laga reebo in ay joogaan ruuxyada.
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii bilaabi wacdiga tawxiid, iyo sidoo kale Rasuulkiisa oo dhan. Waxaa ka mid ah tusaalooyinka waa, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in Mu'adh bin Jabal anhu Radi markii diray Yemen. 
Waxa uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Hubaal waxaad soo dadka Kitaabka ah, ka dibna u yeedhi u furno inuu jiro ilaah kan diibadahi midig si sax ah Eebe mooyee, iyo in Muxammad waa Rasuulkii Eebe. (In ereyo kale, Oo sidaas daraaddeed markii ugu horeysay Kaaga dadka ku wacdiya waxa ay tahay inay Alle keligii la caabudo) (iyo sidoo kale ereyo kale, sidaas daraaddeed Ilaah bay ka dhigi doonaa sida diibadahi kaliya ee xaq u leedahay). Hadday uu u (In taariikh, marka ay mentauhidkan Eebe), ka dibna u sheeg in Eebe ku waajib ah iyaga inay tukadaan shan jeer maalintii. Haddii maqlaan, maxaa yeelay, sida in, ka dibna u sheeg in Eebe u Yeelay khasab iyaga ku soo kor jacayl, kaas oo laga soo qaatay hodanka ah iyaga ka mid ah oo kadibna loo qaybiyey masaakiinta iyaga ka mid ah. Hadday uu u, ka dibna waxaad ka fogow Xoolahooda waa wanaagsan oo aad ka cabsan kuwa dizhalimi salaadda, sababta oo ah ilxidhka u dhexeeya salaadda dadka dizhalimi la jirin Ilaah waa. 
TAUHID IYO CADDAALAD
First. Ilaah waxa uu inoo sheegayaa in ujeedada abuuritaanka iyo amarka waa, uun in ay ogaadaan magacyada iyo sifooyinka, in iyaga caabudno inay Eebe, lama midoobin uunkiisa, iyo caddaalad Man in. Justice waxaa aasaas u ah abuuritaanka Samooyinka iyo Dhulka, Eebe wuxuu leeyahay,
Run ahaantii waxaan u dirray Rasuulladanada way la keeno cadaymo la taaban karo oo aan Soo Dejinay oo iyaga kitaabka al iyo dheelitirka (caddaaladda) si ay awood dad si ay u fuliyaan caddaalad ... iyadoo [al reer Xaadiid / 57: 25].
Aayaddan waxa Eebe inoo sheegayaa in ujeedada soo socda rasuullada iyo hoos u Qorniinka uu yahay in caddaaladda aadanaha. Caddaalad ugu weyn waa tawhid (mentauhidkan Eebe), iyo midnimada mawduuca, asal ahaan, iyo guul caddaalad. Inkasta oo shirk waa kezhaliman. Eebe wuxuu leeyahay,
Illeen shirk waa kezhaliman ugu weyn. [Luqman / 31: 13].
Sidaa darteed, warwareego (la wadaajiyo Eebe Mushrikiin) waa ugu kezhaliman daalimiin ah, iyo tawxiid waa caddaalad ugu siman. 
Labaad. 'Aqeedah ee tawxiid siidaysay qalbi iyo naf bay dhibkeedii Caalamka u la caabudo oo kaliya in Alle oo keliya, hana raacina laakiin oo kaliya in ay Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii.
'Aqeedah ee tawxiid, wuxuu u baahan yahay Muslim ah oo lagu dayacayo dhamaan foomamka dhibkeedii in Eebe ka sokow, maxaa yeelay, wax walba oo kale oo aan ahayn Ilaah waxaa laga abuuray, kaasi oo aan lahayn awood ugu yar in la abuuro, siin iyo guryaha kala duwan ee kale Ilahiyyah.
Taa waxaa ka duwan, kuwa sanamyada, taasoo la micno uu sameeyey Dulmi -lawan ee adil- mar dissenter. Sidee ayaa laga yaabaa inay wax-aan lahayn kekuasaan- markii Ilaah isaga araggiisa ayuu ka abuuray caabudaan, oo uu u mahad celiyay wax, waa Ilaah oo keliya, kuwaas oo isaga siiyey nasiib wacan. Eebe wuxuu leeyahay,
Oo anigu waxaan Xaq ahayn umaanan abuurin Jinni iyo Insiba leh, marka laga reebo inay i caabudaan. Ma doonayo in aan wax kasta oo iyaga ka mid ah nasiib wacan waxoogaa yar oo aan sameeyo ma gujinaya ruuxaan si ay i quudiyaan. Dhab ahaan yaa Eebe, mar uu yahay Rizki nooleyn ee Yang ayaa awood aad u xoog badan. [Adh Dzariyat / 51: 56-58]
Saddexaad. Taliskuna inay sameeyaan xaqnimo.
... Dabbaqaya waa caddaalad darro, maxaa yeelay waxa ay (xalaal ah) waa dhow Dhawrsashada .... [Al maa-idah / 5: 8].
Islam, sida diin tawxiid, kuwa raacsan amray in ay anshaxa sharaf leh, damiir wanaagsan iyo kuwa xun u diid. Sidoo kale Islam ku amray oo dhan camal cadaalad ah oo wanaagsan iyo mamnuucayo camal xun. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Indeed, Eebana wuxuu sheegi xaqa (aad) in ay si caddaalad ah, oo wanaag samee, Wax siinta qaraabada, iyo Ilaah ha naga fogeeyo Xumaan, Munkar iyo cadaawad. Wuxuu idin bara, waxaa laga yaabaa in tihiin inaad u fiirsataan. [An-Nahl / 16: 90].
Kaasoo ah Ilaaha ugu baaqaysaa kitaabkiisa (al-Quraanka) sida xukun cadaalad ah. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Markaasay ayaa kaa weedh ku qumman Rabbiga ah (al-Quraanka), (xukun) waa xaq iyo xalaal ah ... -al An'am / 6, faqradaha 115- dhibic, xaq wararka, iyo cadaalad in maamulo iyo mamnuucay. [11 ]
Tan afraad. Tawhid iyo cadaalad in ay walaalahood Muslimiinta iyo gaalo.
TAUHID oo kala duwan DADKA KA DHEXEEYA Muslimiinta jaahilka ahaa
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay, in dadka ku odhan, rumeeyana weedha midnimada (لا إله إلا الله), ka dibna uu yahay Muslim ah oo xaq u leh ilaalinta taliyihii Muslimiinta iyo aad u hesho yabooh samada. Muslim A ayaa xaq u leh xaq ka mid ah wala '(daacadnimada) ee kale ee Muslimiinta ee sababtoo ah tawxiid iyo addeecidda Eebe iyo Rasuulkiisa sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii.
Taa waxaa ka duwan, kuwii Beeniyey weedha midnimada samayseen shirk -oo kesyirikan u diiday inuu of Islamic markaas waa in la diriray reer qofka iyo xaq Barca '(nacayb) ee Muslimiinta oo dhan. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
La dagaallama kuwaan rumeyn Eebe iyo maalinta markaas oo ay hana diidina waxa reebay Eebe iyo Rasuulkiisa iyo kuwa aan qirayaa diin waa run (Islam), (sida dadka), kuwaas oo la siiyay al Kitaabka ilaa ay ka dhiibaan jisyada (canshuurta) iyagoo Adeeci doonaya in ay ku jiraan xaalad ah ka dambeeya. [At Tawbah / 9: 29].
Word uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii:
Waxaana lay faray inuu la diriro dadka, ilaa ay ka marag furaa in uu jiro ilaah kale majiro (Jirkiisa Ilaah) in si sax ah diibadahi laakiin Eebe iyo in Muxammad waa Rasuulkii Eebe, ilaalinta Salaadda, iyo ajarkooda. Haddii ay sameeyeen in, ka dibna ay dhiig iyo maal, haddaanan idinkula ilaaliyo xuquuqda Islaamka, oo ay Xisaabtiisu waa in imtithaal. 
Taliska si ay ula dagaalamaan gaalada iyo Mushrikiinta waxa sabab u ah gaalnimo iyo iyaga kuwa sanamyada Eebe ka Mid ah iyaga-iyo sidoo kale kan Abuuray 'aqidah kuwa weecin ka' Aqeedah ee tawxiid; ma sababtoo ah aano qof ahaaneed, dagaal-goboleedka ama taritoriga. Kaasi waa amarkii Ilaah Rasuulkiisa, sidoo kale umadan inay la diriraan gaalada, si dadka, awelna loola si loogu badalo in ay Ilaah iyo mentauhidkanNya.
Talis dagaalamaan, dagaalamaan oo dila gaalada, in uu yahay Xarbi jaahilka (dagaallama Muslimiinta). Sida in gaalada oo ha la diririna Muslimiinta, ka dibna waxaa lagu amray inaad samaysid xukun aan iyaga iyo waa in aan lagu soo degsado zhaliminya. Haddii ay ka digayaan waligoodna dhimmi (ilaaliyo xukunka Islaamiga ah), ama mu'ahad (galeen heshiis la gashay Dawladda Islaamiga ah), ama musta'man (ilaalinta nabadgelyada ee Dawladda Islaamiga ah), ka dibna waxa ay tahay in aan la dilay. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Eebe kama reebayo in wanaag la falo iyo cadaalad in kuwa idinla dagaalama, sababtoo ah diinta iyo ma (sidoo kale) aad Guryahoodana ka bixinin. Indeed, Eebe wuxuu jecel yahay kuwa garsooree. [Al Mumtahanah / 60: 8].
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii halis ku dadka u dilaan gaalo mu'ahad ama dhimmi la ciqaabo adag. Waxa uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ruuxii u Dila mu'ahad ah gaal, dabadeedna wuu ka ma aan ursan doono samada. Marka Dhab ahaantii ay urin karaan caraf ee samada ka (fog) safri afartan sannadood. 
Sidoo kale erayga uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii:
Ruuxii u Dila khabiir dhimma ah, dabadeedna wuu ka ma aan ursan doono samada. Marka Dhab ahaantii ay urin karaan caraf ee samada ka (fog) safri afartan sannadood. 
Tani waxay muujinaysaa in, gaalada oo keliya waa in aan dhiig u daadiyaan, iskaba daa kulankii Muslim ah. 
TAUHID kugula MUSLIM QOFKA 
First. Dembiyadii tauhid Ilaaha ka tirtiri doonaa.
Caddaymaha, kuwaas oo erayadii Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii xadiis Qudsi ah, ka Anas ibn Maalik Radi anhu, wuxuu yidhi anigu waxaan maqlay Rasuulka sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay, Eebe, ka Nasahanyahay oo adkaada ayaa yiri:
"... Banii Aadamow, haddii aad ii yimaadeen dembiyadiinna dhulka jooga oo dhan, in kastoo markii aan dhiman wadaajin yar, runtii, waxaan idinku siin doonaa dambi dhaaf buuxa ee dhulka si kastaba". 
Labaad. Imtithaal reebi doonaan dhibaato iyo murugo adduunka iyo Aakhiraba kuwa tauhid.
... Ah kuwa Dhawrsada Eebe, wuxuuna ku qaban doonaa isaga jidka ka soo baxay. Oo isaga siin nasiib wacan ka jihada taas oo aan la filayn ... "[Ath-Thalaq / 65: 2.3].
Qof ma dhihi ma cabsi Ilaah, hadii uusan tauhid. Dadka tauhid iyo taxadar, uu la siin doonaa jid oo ka mid ah dhibaatooyinka nolosha. 
Saddexaad. Ilaah ka dhigi doonaa, oo waxaad qurxisaan qalbiga tauhid la jacaylka iimaanka, iyo sidoo kale sameeyaan in qalbigiisa nacaybka ay u Gaalnimo, xumaan iyo xumaanta.
... Laakiin Ilaah wuxuu sameeyey, waxaad jeceshihiin iimaanka iyo samaynta (iimaanka) waa quruxda badan oo aad qalbiga, oo aad samaysaan neceb gaalnimo, xumaan iyo xumaanta. Waxay yihiin kuwa raaco jidka toosan. [Al Hujurat / 49: 7].
Tan afraad. Tawhid waa sababta kaliya ee si aad u hesho Raalli ahaanshaha Eebe. Oo dadkiina waxay ugu farxad leh shafeeco oo ka mid ah Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii waa qofka ku Xusa لا إله إلا الله la daacadda buuxda qalbigiisa.
Dadka ugu farxadda leh syafa'atku mandapat Maalinta Qiyaame, taasina waa, kuwii odhan "La ilaha illallaah" si daacad ka qalbigiisa ama naftiisa. 
Fifth. Imtithaal ka mid noqon doona damaanad ah in tauhid Jannada.
Ku alla kii ku dhintay wuuna garanayaa Ilaah kale ma jiro ayaa diibadahi saxda ah si sax ah laakiin Eebe, ka dibna uu aado xagga samada. 
Lixaad. Imtithaal siin doonaa guushii, gargaarka, Liibaan iyo ammaanta kuwa tauhid.
Kuwa xaqa rumeeyow haddaad u gargaartaan (Diinta) Eebe, isna wuu idiin gargaari, oo la xoojiyo booskaaga. [Muhammad / 47: 7].
Toddobaad. Imtithaal siin doonaa nolol wanaagsan Adduun iyo Aakhiraba u tauhid ninka.
Ruuxii fala wanaag, rag iyo dumarba ee gobol ka mid ah iimaanka, ka dibna waxa Dhab ahaan waxaan isaga nolol wanaagsan siiyey doonaa waxaana a reply iyaga Ajir ka khayr badan waxa ay sameeyeen siin doonaa. [An-Nahl / 16: 97].
Sideedaad. Tauhid ka hortagi doontaa Muslim ah waari in cadaabta.
"Deggan oo samada ka soo kacaan xagga samada, oo dadka Jahannamo galaan Naarta Jahannamo, markaas ka dib markii Ilaah in sidoo kale yiri:" ka qaada (Jahannamo) kuwa quluubta ka jirto miisaan ah iniin khardal ah iimaan, 'ka dibna ay la saaro cadaabta, oo kaliya oo kaliya, waxay lahaayeen jet jidhka madow (sida dhuxusha). Markaas ay geliyey webiga nolosha, markaas jirkoodu uu korayo (badelin) sida koritaanka miraha ku jira oo qararka webiga. Ha aad aragto in farcanka koraa jaalaha ah iyo laalaabka? " 
Ninth. Tawhid waa muhim u aqbalo ama diido samafal aadanaha.
Qof kaamil ah ama aan ku xidhan tahay hay'ad samafal tauhidi. Dadka waxa wanaagsan sameeyo, laakiin ma tauhidi kaamil ah, tusaale ahaan liidaa, iyagoo aan daacad ahayn, samayn shirk, hay'ad samafal oo shaki waxkasta oo isagaan filan doonaa, in uusan farxad ha ku celin. Sidaa darteed, dhammaan hay'adaha samafalka waa in la sameeyaa iyada oo daacadda u ah Eebe, ama qaab salaadda, sadaqad bixinayso, samafal, soonka, Xajka iyo kuwa kale.
Eebaha abuuray geeri iyo nololba, si uu dadow idiin imtixaamo, oo idinka mid ah hay'ad samafal ah oo ka wanaagsan. Eebana waa adkaade dambidhaafe ah. [Al-Mulk / 67: 2].
Aayaddan sharaf leh, Allah sheegayaa "camalka wanaagsan", ma aha "hay'ad samafal oo badan". Charity, loo yaqaan wanaagsan ama kuwa xaqa ah, haddii ay la kulanto laba xaaladaha, kuwaas oo daacad ah oo Ittiba 'si ay n Nabiga. Sida ku xusan xadiis, jumladda لا إله إلا الله, maalinta qiyaame, miisaanka ka culus yihiin cirka iyo dhulku ay sababi daacad ah.
Kii tobnaadna. Dadka Tauhid oo ka heli doontaa dareen ah ammaanka iyo hanuun.
Dadka aan mentauhidkan Ilaah dhammaataan, si uu mar walba ahaa ka walwalsan, had iyo jeer wuxuu ku dhex jiraa xaalad cabsi iyo walwalsan. Waxay ka cabsateen maalin xun, ama cabsida qabo in ka badan laba caruur ah, wax cabsi ah ka mustaqbalka, cabsida laga qabo inuu hanti la waayay iyo wixii la mid ah.
Dadka rumaysan oo aanay u Iimaankooda arxan (shirk) qaso, iyagu waa kuwa helay ammaanka, waana kuwa hanuunsan. [Al An'am / 6: 82].
TAUHID Samo falku inaad EE THE MUSLIM 
Diin aan Islaamka ee tawxiidka, waa ku haboon oo ku haboon in kasta oo waqtiga, meesha, iyo xaalad ka mid ah Umadda. Taasi waa, ugu cuslaataan Islam, ma reebi doonaan faa'iido u ah Ummadda. Kuwaas oo ah diimaha muwaxidiin ah, ummadu ay noqon doontaa ammaan wanaagsan, barwaaqo ah, ammaan iyo. Hadday u kulmaan Insi doonayo badbaadada dunida iyo Aakhiroba, ka dibna waa in ay diinta Islaamka iyo ku xiran yahay si ay u hirgeliyaan shareecada Islaamka. Laakiin waa in la xusuusto, waafaqid iyo incompatibility of Islam, macnaheedu ma aha in Islam ahaa in ay sii taliska wakhti, meel iyo duruufaha nin sida la doonayo oo ay dadka qaar ka mid ah.
Islaamku waa Diinta toosan, imtithaal ballan guul kuwa ugu cuslaataan diinta waa uu fiican yahay, laakiin shardi ah in ay waajib tahay Ilaah mentauhidkan, takhalusay oo dhan (form) warwareego, syar'i waxbarashada iyo barbarta oo Fala Camal Fiican. Allaah ballan qaaday, u samayn doonaa talada haya ee dhulka, taasoo xaqiijineysa inay iimaanka, iyo in la sameeyo ay nolosha Adduun ammaan Sentausa. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Eebana wuxuu u yaboohay kuwa xaqa rumeeyey ee camal fiican falay oo aad ka mid ah, in uu si dhab ah u samayn doonaa xukunka dhulka, sida uu iyaga hor dhigay kuwa awoodda, oo si adag u xoogayn doonaa iyaga Diintooda taas oo uu Doortay Korkooda, iyo inuu run ahaantii beddeli doonaa (state) ay, ka dib markii ay ku jiraan cabsi ah in ay ammaan Sentausa. Weli ayay ii caabudaan, iyadoo aan ii shariig wax. Laakiin ku alla kii (weli) Gaaloobay rumayn ka dib (balanqaadayaa) in, markaas waa iyaga kuwa faasiqoobay. (Nur ah / 24: 55). Sidoo kale fiiri warqadda aayadda al-A'raf 96.
TASHFIYAH IYO MT, NOQOSHADDA KEY ammaanta ISLAAMKA 
Jidka si ammaantiisii hore, barwaaqo, iyo daryeelka bulshada waa in ay sameeyaan tashfiyah (oo daahirinta) oo ah wax aan la garanayn ayaa ku milantay galay Shareecada Islaamka, sida shirk, diidmada oo ka mid ah sifooyinkii imtithaal ama penakwilannya, diidmada xadiiska -hadits dhab ah oo la xiriira 'aqidah iyo kuwa kale. Sidoo kale tashfiyah (oo daahirinta) cibaadada noocyo kala duwan een taas oo uu ku saxaroodaan ka khayroon daahirnimo iyo u ah si kaamil ah Islaamka. Oo weliba tashfiyah duurka ku Fasiraadda, fiqiga, iyo kemungkaran kala duwan oo nijaasayn Banaysanina of Islam.
Ma tarbiyah (tababarenimo) jiilka Muslimiinta ka badan oo la waayay kemungkaran Muslimiinta. Ie, iyadoo tababare Islamically saxda ah, laga bilaabo sanadaha hore, iyo iyada oo aan la saameeyay waxbarashada galbeedka gaaloobay, ka dibna la isugu keeno in midnimada 'Aqeedah ee tawxiid, sida' Aqeedah tukan Sunnah.
'Aqeedah tukan Sunnah waa habka ugu fiican in la mideeyo xoogga Muslimiinta iyo midnimada dagaallada, si uu u xaliyo wax kasta waa la dumiyey diinta iyo dunida arrimaha. Tani waa sababta oo ah 'Aqeedah tukan Sunnah waa in la soo celiyo Muslimiinta in ay al-Quraanka iyo Sunnaha Nabiga sallallaahu awood' Laahu calayhi wa calaa aalihii, iyo soo laabtay Jidka Mu'miniinta, sida ugu Sokeeyaha Radhyallahu anhum. Habkaani waxaa laga yaabaa in aan la ogaaday in koox kasta, ama hay'adaha wax faafinta, ama urur kasta oo aanu isku duubtid aan ahayn 'Aqeedah tukan Sunnah wal jamaacadda. Taariikhda ayaa marag u ah xaqiiqada. Dalalka ugu cuslaataan 'Aqeedah ku tukan Sunnah oo keliya Kaliya midoobaan karaa xoogga Muslimiinta ku kala firidhsan. Keliya 'aqidah ka Salafkii oo keliya, markaas jihaadka iyo sidoo kale amrayaa wanaagga iyo xumaanta u diidaya waxaa qumman, oo lagu gaaray ammaanta Islam. 
Iyadoo 'aqidah ee Salafkii, Muslimiinta iyo Waacidiinta-da'inya midoobaan doonaa, si loo gaaro ammaan iyo noqdo sida ugu fiican ee Umadda. Tani, sababta oo ah 'Aqeedah Salafkii ku salaysan yahay al Quraanka iyo Sunnaha sida uu faham ka mid ah Ehelu. Sida for 'aqidah badan' ka aqidah Salafkii, isagu ma uu samatabbixin doonaa guusha midnimada, xitaa waxa dhici doona waa burbur iyo burbur. Sidaas shaki ku jirin, wadada si guul iyo ammaan ee Muslimiinta, waa inay ku soo laabtaan si ay 'aqidah iyo manhaj run ah, kuwaas oo ah' Aqeedah tukan Sunnah wal jamaacadda; 'Aqidah iyo manhaj Salafkii.
Imam Malik rahimahullah yiri:
Ma awoodi doonaa inuu xaliyo umadan, laakiin waxa ay ka dhigeysaa jiilka wanaagsan ugu horeysay ee ummadu this (ie, saaxiibo). 
Khatimah: aanu baryeynaa Istiqamah EE ISLAAMKA IYO waxgarashada AS Radi Sunnah SALAFUSH anhum-Saalax
Waxaan ku weydiin Ilaaha Qaadirka ah, in aan tusay waddada Islaamka iyo Sunnah in ay raacaan manhaj Salafush-Saalax iyo istiqamah xaalad mentauhidkan Allaah, hirgeliyaan Sunnah Nabiga, iyo saaro nooc kasta oo shirk iyo faasiqnimo. Waxaan rajeynayaa, Alle in uu inaga dhigo oo ay ku jirto koox ka mid ah dadka ka badbaaday socda wadadii anhum Ehelu Radi ah. Waxaana rajeynayaa in Ilaahay si na soo wada ururi oo jannada ku jira Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii iyo saaxiibbadiis oo Radi anhum.
Salaadda iyo salaanta laga yaabaa in had iyo jeer Ilaah oo la siiyey korkiisa Nabiga Sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, qoyskiisa, uu Ehelu Radi anhum, iyo kuwa la socda uu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii isaga sugayay ilaa iyo dhamaadka waqtiga. Iyo dhammaadka dacaayada Mahad oo dhan waxaa iska leh Eebaha, Eebaha Caalamka.
Waxaan la xiro la kaffaratul shirka tukashada ah:
Waad Nasahantahay, Ilaahow, waxaan kugu ammaani. Waxaan marag ka nahay Ilaah kale ma jiro ayaa diibadahi saxda ah si sax ah haddii aad, waxaan u Dambi Dhaaf warso Eebe una toobad keena in aad.
Ammaana Rabbil 'aalamiin.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 11 / Year X / 1427 / 2006M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]